Discount bemhapemha muchina gadzira uye Fekitori | XiongHuye
EPS Foam unhani muchina wakakosha mushini seyakaipisa waya CNC furo yekucheka muchina, yemakambani, ayo anogadzira ekushongedza ekuvaka furo maumbirwo. Kumusoro kwemhando dzekushongedza, idzo dzakatemwa neEPS matombo, dzinofanirwa kuvezwa nemuchina wekuputira furo, kuchengetedza nzvimbo yekuvaka kubva kune inoparadza mamiriro ekunze (semvura, chando, chimvuramabwe, dutu uye tembiricha mutsauko pakati pehusiku nehusiku)
Semuenzaniso, haugone kuwana yekutanga mhando chigadzirwa kana yako furo yekumachina muchina kana yako dhaka isiriyo kunyangwe iwe ukashandisa akanakisa mhando furo yekucheka muchina wepasi.
Naizvozvo, michina yese mufekitori yako ine zvakakosha zvakaenzana. Izvo zvakakosha kwazvo kuti kambani yako ibudirire kuti iwe utenge michina inoenderana uye inogona kubatanidzwa imwe neimwe.
zvitoro zvekunze zvinoshongedza sarudzo yakanaka.
EPS Foam Kuchengeta Bussiness
Kana iwe uchida kugadzira bhizinesi rinokwikwidza uye rinenge riine kukura kukuru muzana mumusika wekuvaka indasitiri, unofanirwa kugadzira zvigadzirwa zvekupedzisira zvine mhando inogamuchirwa.
Sezvinozivikanwa, chigadzirwa chinofanira kuve chinoonekwa chakakwanira kugadzirisa munzvimbo yakanaka mumusika wako wekutsvaga. Saka chinhu chakakosha kupfuura zvese ndeye pamusoro peako ekushongedza furo maumbirwo modhi inofanirwa kuve yakanyatsotsetseka uye yakajeka. Zvakare makona ayo anofanira kuve akajeka uye akatwasuka. Uye yekupedzisira hapafanire kuve neyakaonekwa bubble pamusoro pezvigadzirwa. Iwe unofanirwa kutarisira iwo mamiriro kuti uwedzere mashandiro eako foam fekitori muchina.
Furo Kuchengeta Kukora
Zvino, iwe une ruzivo rwese nezve kupora furo saka ngatitaurire iwe nezve yepamusoro nhanho ruzivo ruzivo.
Kuti mangani mamirimita maturi akaputirwa kufuro akakosha zvakanyanya sehunhu hwevhu padutu apo uchigadzira ekushongedza ekunze ma profiles uye zvimwe zvigadzirwa zvekunze.
Iwe unogona kuita kupfeka zvakanyanya sezvaunoda pakati pe1 millimeter uye 10 millimeter uchishandisa yedu furo yekupfeka muchina. (Iwo akajairika matope pakukora kwezvinhu zvekunze izvo zvinosarudzika muhunhu hwakanaka uye hupfumi chigadzirwa kirasi kutenderera pasirese vari 2 mm / 3 mm uye 4 mm.) Haisi nzira chaiyo yekufunga iyo inofunga kuti "chigadzirwa chakaputirwa mukobvu chinogara chiri mhando yakanaka. ”
Standard muchina zuva ndapota batanidza nesu, kana kusiya meseji, ichakutumira iwe munguva pfupi.
Pashure: Polyurethane pfapfaidzo furo muchina
Zvadaro: Yenhamba Kudzora Furo Kucheka Muchina